အားလပ်ရက်ခရီးစဥ်မှာ အန္တရာယ်မရှိပဲ ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်နိုင်မည့် အကြံဉာဏ် (၁၅)ချက် - ONE DAILY MEDIA
မရိုးမသားသူ လူလိမ်များဟာ ခရီးသွားဧည့်သည်များကို အခွင့်ကောင်းယူရန် အမြဲကြိုးစားနေပြီး သတိမထားပါက သင်ထင်ထားသည်ထက် သားကောင်ဖြစ်လာရန် ပိုမိုလွယ်ကူပါတယ်။ ဤအကြံပြုချက်များသည် သင့်အား ငွေနှင့်အချိန်ကုန်သက်သာစေပြီး ဘေးကင်းစွာ ကမ္ဘာပတ်နေနိုင်ရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ် ။ ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် ဤအကြံပြုချက်များ မလိုလားအပ်သော ပြသာနာများကိုရှောင်ရှားရန်နှင့် သင့်အားလပ်ရက်ကိုအကောင်းဆုံး အကျိုးကျေးဇူးရယူရန် ကူညီပေးပါမယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အားလပ်ရက်ခရီးကို နှစ်သက်ကြပြီး စိတ်ပျက်စရာမရှိအောင် မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကို သုတေသနအချို့ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဤအရာကို ကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူများထံ ပြသလိုပါတယ်။
(၁) အခမဲ့အရာများဟာ လိမ်လည်မှုများဖြစ်နေတတ်သည်ကို သတိပြုပါ
လမ်းမများပေါ်တွင် ဖျော်ဖြေနေသည့် အနုပညာရှင်များကို သင်မြင်ဖူးပြီး အချို့မှာ မယုံနိုင်လောက်အောင်ပင် ကောင်းမွန်ပါတယ်။သို့သော် သူတို့သည် သင်နှင့်အတူ ဓာတ်ပုံရိုက်ရန် ကမ်းလှမ်းသောအခါတွင် သတိထားပါ၊ ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့သည် ပုံရိုက်ပြီးနောက် ငွေပေးချေရန် တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် အသုံးများသည့်လှည့်ကွက်မှာ “မိတ်ဆွေဖြစ်လက်ကောက်များ” ဖြစ်ပါတယ်။ လိမ်လည်သူများက “အခမဲ့ပါ” ဟု ပြောကာ သင့်လက်ကောက်ဝတ်တွင် ချည်ပြီးမှ ပိုက်ဆံတောင်းကြပါတယ်။ သူတို့သည် အဖွဲ့လိုက် လာလေ့ရှိပြီး ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ယောက်က သင့်လက်ကို ဆွဲကိုင်ပြီးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အများစုမှာ အနည်းငယ်ကြောက်လန့်ပြီး “ငြင်းဆိုရန် ” နှောင့်နှေးနေလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် “No” လို့သာပြောပြီး သူတို့ကို ချည်နှောင်ခွင့်မပြုပါနဲ့။
ပတ်စပို့ဓာတ်ပုံများ၊ ခရက်ဒစ်ကတ်များ၊ ကင်မရာဘက်ထရီများ… ဤအရာအားလုံးဟာနေရာများစွာမယူတာဘဲ သင့်အားလပ်ရက်ခရီးကို အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် ဘေးဥပဒ်မဖြစ်အောင် ကယ်တင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အရေးပေါ်ငွေသား သို့မဟုတ် ကတ်များသိမ်းဆည်းရန် လျှို့ဝှက်နေရာရှိခြင်းသည် အမှန်တကယ် အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ သင် မမျှော်လင့်ထားသည့်အခက်အခဲတချို့အတွက် အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။
နေရာဒေသ၏ အရာသာကိုခံစားသိရှိရန် ဒေသခံများနှင့် တွေ့ဆုံပါ။ ၎င်းတို့၏ နေထိုင်မှုပုံစံက သင်နှင့် ကွဲပြား နေခြင်းကို မစွက်ဖက်ပါနဲ့ ။ စိတ်သဘောထားကြီးပါ။
(၅) ငှားရမ်းထားသော မော်တော်ဆိုင်ကယ် သို့မဟုတ် စကူတာ များပျောက်ဆုံးပျက်စီးတတ်သည်ကို သတိပြုပါ
A post shared by STORM (@stopstorm)
မော်တော်ဆိုင်ကယ် သို့မဟုတ် စကူတာ ငှားခြင်းဟာ အားလပ်ရက်ခရီးများအတွင်း အလွန်အဆင်ပြေနိုင်ပြီး ငှားရမ်းမှုအများစုမှာ အစစ်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် သတိပြုရမှာက သင်ငှားထားသော ဆိုင်ကယ် ၊ စကူတာ ပျက်စီးသွားခြင်း သို့မဟုတ် ခိုးယူခံရကြောင်း တွေ့ရှိနိုင်ပြီး ပြုပြင်မှု သို့မဟုတ် အလုံးစုံအတွက် သင် ပေး လျော်ရမည်ဖြစ်ပါတယ် ။ လိမ်လည်ငှားရမ်းသူများတွင် ၎င်းတို့ပေးထားသော သော့၏ဒုတိယ သော့တစ်စုံရှိနိုင်တာကြောင့် ကိုယ်ပိုင်သော့အသုံးပြုပြီး စက်ဘီးထားရန် လုံခြုံသောနေရာကို ရွေးချယ်ပါ။
A post shared by Can-am Renegade (@hunagarian_atv_team)
အပန်းဖြေခရီးများတွင် စီးရတာ ပျော်စရာကောင်းသည့် ဂျက်စကိတ်များ၊ စက်ဘီးများ သို့မဟုတ် စနိုးဘုတ်များကဲ့သို့သော လျင်မြန်သည့်အရာများ ပါဝင်လေ့ရှိသည့် လိမ်လည်မှုတစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။ စီးပြီးနောက် သင်ပြန်အပ်သည့်အခါတွင် သင့်အား ခြစ်ရာနှင့် အက်ကွဲကြောင်းပြကာ ပြုပြင်မှုအတွက် ပေးဆောင်ရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု ပြောတတ်ကြပါတယ် ။ ထို့ကြောင့် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို အသုံးမပြုမီ စုတ်ပြဲခြင်း၏ လက္ခဏာအားလုံးကို ဓာတ်ပုံရိုက်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
(၇) အနှောင့်အယှက်နည်းရန် မနက်ခင်းလေကြောင်းလိုင်းကိုရွေးပါ
A post shared by Sergi López (@pilotsergi94)
မိုးကြိုးမုန်တိုင်းအများစုဟာ နေ့ခင်းပိုင်းနှင့် ညနေပိုင်းများတွင် ဖြစ်ထွန်းလေ့ရှိသောကြောင့် သွားလာရာတွင် နံနက်ပိုင်းလေကြောင်းများ ဟာ ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
စောစောထခြင်းဖြင့် လူစုလူဝေးကို ရှောင်ပါ။ နံနက်ခင်းအချိန်ဟာ ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက ၎င်းကို “ရွှေရောင်အချိန်နာရီများ” ဟုခေါ်ကြပါတယ်။
ကျောင်းပိတ်ရက်များသည် ကလေးရှိသော မိသားစုများအတွက် အပန်းဖြေခရီးထွက်ရန် တစ်ခုတည်းသောအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်တွင် ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးများမရှိပါက ကျောင်းတက်ရက်များအတွင်း အပန်းဖြေခရီးထွက်ရန် စဉ်းစားပါ။ သင်သွားသည့်နေရာများသည် လူများနေမည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် သင့်ခရီးကို အကောင်းဆုံးခံစားရန် ခရီးသွားရာသီပြင်ပ ခရီးသွားခြင်းကအကြံကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
(၁၀) ဘာသာစကား အသစ်များလေ့လာပါ
သင် အခြားနိုင်ငံသို့ ခရီးသွားသည့်အခါ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုရန် မလိုအပ်သော်လည်း စကားစုအချို့ကို သိရုံမျှဖြင့် သင့်ခရီးသွားအတွေ့အကြုံတွင် ကြီးမားသော အပြောင်းအလဲကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ခရီးသွားများ အနေဖြင့် ရောက်ရှိနေသည့်ဒေသ၏ ဘာသာစကားကို စကားလုံးအနည်းငယ်ပြောနိုင်သည့်အခါ ဒေသခံအများက သဘောကျလေ့ရှိကြပါတယ်။
A post shared by Vespula – Handluggage Travel (@vespula.luggage)
ယနေ့ခေတ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွင် အီလက်ထရွန်းနစ် ကိရိယာများစွာရှိပြီး ၎င်းတို့တစ်ခုစီတွင် အားသွင်းကိရိယာများနှင့် ကေဘယ်ကြိုးများပါရှိပါတယ်။ သင်အားလပ်ရက်ခရီးမသွားမီ သင်သွားမည့်နိုင်ငံ၌ သုံးလို့ရမည့် adapter ကို သင်ကိုယ်တိုင်‌ရွေးယူပါ။ ၎င်းသည် သင့်အား အချိန်များစွာ သက်သာစေမည်ဖြစ်ပြီး သင်ရောက်ရှိနေပြီးကာမှ လိုအပ်သောအရာကို ရှာဖွေရန် ခေါင်းကိုက်ရခြင်းကို မဖြစ်စေတော့ပါဘူး။
တစ်ပတ်တာ အားလပ်ရက်ခရီးထွက်တဲ့အခါ ဖိနပ် ၁၀ ရံ တကယ်လိုအပ်ပါသလား ??
(၁၃) လိုသလိုအသုံးချနိုင်ရန် ပဝါ သို့မဟုတ် လုံချည်ထည့်ခဲ့ပါ
A post shared by Sarong Social Club (@sarongsocialclub)
အပန်းဖြေခရီးအတွက် မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားရမည့်ထဲ လုံချည်ကဲ့သို့ အဝတ်ရှည်တစ်ခုပါပါတယ်။ သင့်ခါးတစ်ဝိုက်တွင် ပတ်ခြင်းဖြင့် ကျိုးနွံမှုအတွက် အသုံးပြုခြင်းအပြင်၊ ၎င်းကို နေရောင်ကာကွယ်မှု၊ ဖုန်မှုန့်ကာကွယ်မှု၊ ပဝါ၊ စောင်၊ အချက်ပြအလံနှင့် ရေဇကာအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
(၁၄) ဒေသထွက်စာများ စားပါ
စားရန်နေရာရှာသောအခါတွင် ဒေသခံများ စကားကို လိုက်နာပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်များစွာစျေးသက်သာပြီး သင် ရောက်ရှိနေသော နေရာ၏ တကယ့်အရသာစစ်ကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ကြိုတင်လေ့လာမှု အနည်းငယ်ပြုလုပ်ပြီး မလုပ်သင့်တာတွေကို ရှာဖွေပါ။ အချို့သော ဓလေ့ထုံးတမ်းများသည် သင့်ပုံစံနှင့် အလွန်ကွာခြားနိုင်ပြီး သင်သတိမထားမိဘဲ မသင့်လျော်သောအရာကို ပြုလုပ်မိခြင်း သို့မဟုတ် စော်ကားမိခြင်းပင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် လက်မ-လက်ညိုးကိုထိသော OK သင်္ကေတသည် နိုင်ငံ အများစုတွင် လုံးဝကောင်းမွန်သော်လည်း တူရကီတွင် ၎င်းတို့အား အလွန်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ် ။ ဤနိုင်ငံသို့ လည်ပတ်သည့်အခါတွင် ၎င်းကို ရှောင်သင့်ပါတယ် မဟုတ်ပါက ဒေသခံများနှင့် ဆိုးရွားစွာ ပြဿနာတက်နိုင်ပါတယ်။
Bonus : စိတ်လွတ်လက်လွတ်ပျော်ရွှင်ပါ ။
အံ့အားသင့်ဖွယ် အားလပ်ရက်ခရီးအတွက် အကောင်းဆုံးအကြံပြုချက်မှာ သင့်စိတ်ကို လွတ်လပ်စွာ ဖွင့်ဟထားရန်ဖြစ်ပါတယ် ။ သင် တစ်ခါမှမဖြစ်ဖူးသော အစားအစာကို စမ်းစားကြည့်ပါ၊ သင် တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးသောအရာများကို လုပ်ကြည့်ပါ၊ လူသစ်များနှင့် တွေ့ဆုံရန် မကြောက်ပါနှင့် သင့်အားလပ်ရက်ကို အမှတ်တရ အဖြစ်ဆုံးဖြစ်အောင် နေ့တိုင်း ပျော်ရွှင်စွာ တန်ဖိုးထားလိုက်ပါ။
သင်၏ လာမည့်အားလပ်ရက်တွင် မည်သည့် အစီအစဉ်များရှိပါလဲ သို့မဟုတ် ခရီးတစ်ခုအတွက် သင့်တွင် ကိုယ်ပိုင် စည်းကမ်းအချက်အလက်များ ရှိပါလား ?? ၎င်းတို့ကို အောက်ပါမှတ်ချက်ကဏ္ဍတွင် ရေးသားပြခဲ့ပါ။